कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक योजना सार्वजनिक, एमबीबीएसको तयारी — onlinedabali.com
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक योजना सार्वजनिक, एमबीबीएसको तयारी
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले आगामी शैक्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। विजया दशमीको अवसरमा प्रतिष्ठानद्वारा आज आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा आगामी शैक्षिक योजना सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा‍. निरेश थापाले सरकारबाट पाँच सिट स्नाकोत्तर तहको अध्यापनका लागि अनुमति प्राप्त भएको जानकारी दिए। प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयस्तरको मान्यता पाएको भन्दै उनले आगामी शैक्षिक सत्रमा एमबिबिएसको लागि समेत तयारी भइरहेको बताए।
“२०७६ पुस १४ गते प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट लक्षित कार्यक्रम एमडी जनरल प्राटिक्स एण्ड इमरजेन्सी मेडिसिन तीन, एमडी एनेस्थेसिया एण्ड क्रिटिकल केयर एक, एमडी अर्थोपेडिक्स एण्ड ट्रमा सर्जरीतर्फ एक सिटको कार्यक्रम अनुमति प्राप्त भएकाले अध्ययन अध्यापन अघि बढ्नेछ। व्याचलर अफ नर्सिङ, व्याचलर फार्मेसी, व्याचलर इन क्लिनिकल न्यूट्रिसनसमेत सञ्चालन गरिँदैछ” कार्यक्रममा डा. थापाले भने ।
रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले कोभिड–१९ मा प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेको जिकिर गरे। उनले पिसिआर परीक्षणदेखि विभिन्न जिल्लामा चिकित्सक पठाएर गरेको योगदानमा सरकार र नागरिकको सहयोग, सद्भावले थप काम गर्ने हौसला मिलेको बताए। रजिष्ट्रार काफ्लेले एमडीएमएस कार्यक्रमसहित एमबिबिएस पढाउने तयारी भइरहेको र सरकारले पूर्णरुपमा अगाडि बढाउने वचन दिएको बताए।
अहिले प्रतिष्ठानमा ६२ विशेषज्ञसहित एमडीएमएस र एमबिबिएसलगायत आवश्यक जनशक्ति तयारी भइरहेको छ। फ्याकल्टी अफ मेडिसिन, बेसिक साइन्स, पब्लिक हेल्थ र फार्मेसी गरी ५२ शिक्षकमा प्रोफेसर ११, एसोसियट प्रोफेसर आठ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर १८, लेक्चर १५ जना रहेको शिक्षाध्यक्ष थापाले बताए।
फ्याकल्टी अफ नर्सिङ एण्ड मिडवाइफरीतर्फ दुई एसोसियट प्रोफेसर, सात लेक्चर गरी नौ जनाको जनशक्ति रहेको उनले बताए। सरकारले प्रतिष्ठानलाई ३०० बाट ५०० शय्याको बनाउने लक्ष्यका साथ रु सात करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानका निमित्त अस्पताल निर्देशक एवं विशेषज्ञ डा सूर्यमान लिम्बूले सङ्कटको बेला यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा अपेक्षित सेवा प्रवाह गरिएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पूर्णप्रसाद चौलागाईँले प्रतिष्ठान सङ्कटमा आशाको केन्द्र बनेको भन्दै थप स्तरोन्नतिका लागि सबैको साथ सहयोग चाहिएको बताए।